U fiirso Liiska hantidii qaranka ee lagu wareejiyey il-duuf sharci iyada oo aan loo cuskan xeer nidaamiye dawladeed. qalinkii A/Rahman fidhinle UK.
Friday 5th October 2018 13:02:09 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Hargeysa
B)- Maadaama aanay jirin Xeerarka Maareynta iyo Maalgelinta Hantida Guurtada iyo ma guurtada ee qaranka. C) Maadaama aan loo cuskan wareejinta hantida qaranka xeer-nidaamiye dawli ah ooummadda u qeexaaya waajibaadka masuuliyayeed ee saaran shirkadaha laguwareejiyey hantidii ummadda.
D) Maadaama yoolka Shirkadaha lagu wareejiyeyaanay ku saleysneyn istiraajiyad qaran oo xukuumadu ku leedahay saamiyo badan oo waafiya.
E) Maadaama aanayjirin heshiisyo marag-gal iyo marag-fur ah oo ku saleysan tiir sharciyeed heshiis laba dhinac ah.
F) Maadaama aan loo marin hab-wareejintoodii tartan hufan oo xor iyo xalaal ah (fair competition) oo ummadda iyo ganacsatada dalka oo dhan loo soo bandhigay-Waxaa dhamaan Heshiisyadan Hoos ku taxanlagu bixiyeyil-duuf sharci, taa soolagu-tagri falay Kaabeyaal dhaqaaleoo qaranku wada lahaa, sidaa daraadeed dawlada madaxweyneMuse Biixi Waxaa looga fadhiyaa in ay dhamaan hantidii dawlada ee lawareejiyey iyomashaariicdan hoos ku taxan dib loo eego oolagu soo celiyo gacanta dawlada iyo kefedii miisaanka aheydee sharciga aheyd.
Heshiiska lagu wareejiyeyDekeda Berbera oo aan sadex sano waxba laga qaban ( from 9th may 2015 - 3/10/ 2018 )
Heshiiska lagu wareejiye Madaarkii Berberaoo aan wax qiimo leh la dhaafsan khatarna leh
Shirkada keentaqalabka kala duwan ee xafiisyada Dawlada
Shirkad ku sheegta keenta Direyska CiidamadaQaranka
Shirkada daabacda Baasaboorka Somaliland-waa la soo celiyey
Shirkadaha Qashinka ee Borama iyo Hargeysaoo aan shaqadooda gudan.
Shirkada daabacaada warqada cashuur bixinta Gaadiidka (Road tax ) -waa la soo celiyey
Shirkada daabacda Liisanka gaadiidkaee lafta ah -waa la soo celiyey
Rusqada shirkada batroolkadilaasha / fadhateysata ee Betro Soma
Rusqada Shirkada Batrolka baadha / dilaashaee East African Resource group
Rusqada shirkada Anglo Somaliland resourse loo siiyey in ayKaluunka dalka keligood maamulaan.
Ruqsada ShirkadaSomaliland Hono Grouploo siiyey in ay Macadanta dalka ku gurtaan
Dhamaan Qandaraasyada DPWee ay xukumadii Siilaanyo bixisay sida :
Waxaa Madaxweyne Muse Biixi lagu mahadinayaa go'aanka adag eebar bilowqa ah ee uu ka qaatay soo celinta heeshiisyadan hoose waxaana aanu leenahay Madaxweyne Faanoole fari kama qodna ee halkaa sii kawad!!
1- Heshiiskii Haamihiikeyd kashidaalkaee Berbera.2- Sheybaadhkii shidaalka, Parking kiigegida dayaaradaha Cigal international airport. 3- Dabacaada dokumintiyada dawlada sida Passporka,Cashuurta wadada Road tax, Cashuur ku dhejinta(stamp duty) , liisanka lafta ah ee gawaadhida, buuga dhaq-dhaqaaqa gaadiidka iyoAdeega Amniga eeMadaarada. Danta guud ee JSL waxay ku jirtaa mar walba badbaado qaran iyo in qandaraasyadan badan ee sare ku taxan dib tendherloo wada mariyoootar tan xor ah oo xalaal ah loo soowada maro cidii ku guuleysatana la siiyo ama gacanta dawlada lagu soo wada celiyo si dhaqaalaha dawladu u koro oo shaqo abuurka dhalinyaradunau fududaato.
Waxaan idiinku soo garoocayaa qormadan. "Anigu Daaha Kama Roginee dadkuba wuu arkaayaa.! ee Shacaboow Tiraa Kaa gedmane wax isu gey-geyso" !
Gudoomiye Ku Xigeenka Ururka Solja Oo Xukuumada Ku Eedeeyay Inay Sharcigii Jebisay [Qarran Dumisna Ku Eedeeyay]